Tongasoa eto amin'ny tranonkala ofisialy ny OMASKA entana.
Antsoy izahay : 0086 15350615781
Travel paosy Bag
Neny a Bag
Entana Cover & Belt
Company manana Langchao Omaska ​​Balmatik ho toy ny marika sy ny miara-miasa amin'ny mpividy marika malaza sasany.
Ao amin'ny vokatra, henjana tsara ny fenitra dia aorina amin'ny fampandrosoana ny famokarana mba hahatonga ny vokatra ho tsara indrindra. Ao amin'ny fanompoana, mpanjifa hafa avy any amin'ny firenena sy ny faritra dia afa-po ny fotoana rehetra.
Company foana miaraka amin'ny andro sy innovates eo amin'ny fototry ny tsena. Products miova ny catagory samihafa fa tsy iray ihany no tsara fanahy. Baiko manokana dia ekena fa tsy afa-bahoaka baiko.
Natokana ho fanatitra ny mpanjifa sy ny vokatra tsara indrindra fanompoana, ny teny filamatra hoe "Ny hanome fahafaham-po ny Platform More olona, ​​Amin'ny ny Products handray soa More Mpanjifa"!
"Ny fanaovana vokatra tsara rehetra, Manompo mpanjifa rehetra tsara" dia ny tari-dalan'ny Tianshangxing ekipa. High quality vidiny vokatra tsara indrindra no tanjona mandrakizay Tianshangxing dia miasa amin'ny. Mino isika fa ny vondron'olona iray miaraka amin'ny tanjona sy ny nofy dia miteraka fahagagana. Aoka isika hiaraka tanana ary manao zava-bita lehibe miara-. Izahay teny an-dalana rehetra ny fotoana!
Factory adiresy: NO.12 Yanling lalana, Qunyu lalana, CT milina orinasa zaridaina, Baigou tanàna, (Gaobeidian tanàna) tanàna Baoding, Hebei faritany, Sina.
Seranam-piaramanidina akaiky indrindra: Tianjin Binhai seranam-piaramanidina (na Beijing renivohitra seranam-piaramanidina)
Mitaky 3hours avy any Beijing Tianjin na seranam-piaramanidina ny orinasa amin'ny alalan'ny fiara
Akaiky indrindra fitobiana: Baigou-peo (na Gaobeidian toerana east)
Mitaky 20minutes avy Baigou stationt ho orinasa ny fiara
Mitaky 40minutes avy any atsinanana Gaobeidian gara ny orinasa amin'ny alalan'ny fiara
Fifandraisana Factory olona: Mr. Allen (varotra mpitantana)
Email: sales018 @ 'ny aigouluggage.cn
Factory Address : 12, Yanling Road, West Xingsheng Street, Baigou Town, Baoding, Hebei, Shina (Tanibe)
Suitcase Sets 3 Pcs, High Quality Suitcase, Suitcases, Duffel kitapo naterak'ireo kodiarantsika , 6pcs Kids Printing Set , School Bags ,